Ciidanka Dowladda oo howlgal ay sameeyeen ku dilay Saraakiil Shabaab ah | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Ciidanka Dowladda oo howlgal ay sameeyeen ku dilay Saraakiil Shabaab...
Ciidanka Dowladda oo howlgal ay sameeyeen ku dilay Saraakiil Shabaab ah
Howlgalkaan ayaa waxaa laga fuliyay degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe,waxaana la sheegay in lagu dilay Saraakiil iyo Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka Dowladda ayaa waxaa ay sheegeen in howlgalka ay fuliyeen Ciidamo faransiis ah oo taageerayay Ciidanka dowladda, kadib markii Saddex diyaaradooda ay ku daadiyeen duleedka degmada Jilib, isla markaana halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Sidoo kale Saraakiisha Ciidanka Dowladda oo qeyb ka ahaa howlgalka ayaa waxaa ay sheegeen in howlgalka ay ku doonayeen inay kusoo qabtaan Xubno ka tirsan Al-Shabaab, balse dagaal ay la galeen ay ku dileen laba Sarkaal iyo 16 kamid ahaa ilaaladooda halka Xubno kale lagu dhaawacay.
Deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolada Jubbooyinka ee Maamulka Jubbaland ayaa dhowr jeer waxaa la dhacay duqeymo ay fuliyeen Diyaaradaha Mareykanka oo taageerayay Ciidamada Dowladda Soomaaliya, kuwaas oo la sheego in lagu dilay Xubno Shabaab ah.
Maqaal horeLaamaha Amniga Gobolka Bari oo gacanta ku soo dhigay Xubno katirsan Daacish
Maqaal XigaWasiir Goodax oo guul u rajeeyay ardayda maanta u fadhiisaneysa imtixaanka shahaadiga dowladda